Nhau - Maitiro ekuchenesa nekuchengetedza iyo tini tin bhokisi zvine hungwaru
Tin Bhokisi Yakarongedzwa neChimiro
Round Tin Bhokisi
Yakajairwa Tin Bhokisi
Yakaenzana uye Rectangular Tin Bhokisi
Tin Inogona Kuiswa Nekushandisa
Chinwiwa neTini Matini
Biscuit & Candy Mataini
Zvitinha Zvekudya Matini
Zvidimbu zveOiri zvinodyiwa
Tea & Kofi Tin
Mota Wax Tini
Mota Oiri & magaba ekugadzirisa
Nei Tin Packaging
Nei Byland Inogona
Maitiro ekuchenesa nekuchengetedza iyo tini tini bhokisi zvine hungwaru
Vanhu vanowanzo kuti: "Zvinhu zvinomwe kuvhura musuwo, huni, mupunga, mafuta, munyu, muto uye vhiniga tii." Izvi zvinoratidza kuti tii yapinda mumativi ese ehupenyu. Saka vanhu vechiChinese vanofarira kunwa tii, saka imi mese munoziva nezve kugadziriswa kwemabhokisi etii ekurongedza?
1. Edza kudzivisa kusangana nemafuta stain pane iyo tini bhokisi. Kana iwe netsaona ukawana ivhu rakaoma kubvisa, usarikwese nechinhu chakaoma. Unogona kuisa dota remudzanga pavhu uye woipukuta nejira redonje kuti ubvise mavara. Matunhu emuno Inogona kupukutwa nemucheka wakachena wedonje wakanyikwa mupurasitiki.
2. Tea tini bhokisi rine matte pamusoro rinogona kucheneswa nemvura inodziya ine sipo; nepo tii tini bhokisi ine yakatsetseka pamusoro inogona kupukutwa neepamusoro-soro sirivha yekuwacha mvura kuchengetedza inogara kwenguva refu inopenya.
3. Usaise chikafu kana chinwiwa mubhokisi retii husiku kuti usashatise nzvimbo. Mushure mekuchenesa tii tii bhokisi, ive shuwa yekuisuka kwazvo uye kuomesa munguva, nekuti iyo inosara sipo uye madonhwe emvura anokuvadza pamusoro pebhokisi tii.
4. Dzivisa kubata tii tini bhokisi nemirazvo kana kuiisa munzvimbo inopisa. Kana iyo tini bhokisi inodziyirwa kusvika anodarika 160 degrees Celsius, maratidziro ayo anozopwanyika uye midziyo inozobvurwa kuita hupfu kana senge dhishi. Naizvozvo, mugadziri weti yetiyi anokurudzira kuti iwe ubate iyo tii Usapisa simbi bhokisi rehunyanzvi pamusoro pe160 degrees Celsius kudzivirira kukuvara.
Muchokwadi, hazvina kuoma kuchenesa uye kuchengetedza iyo tini tini bhokisi, uye hazvisi nyore kutaura kuti zviri nyore. Izvo zvinowanzoenderana nekuchenesa kwaunoita uye chengetedza iyo tini tini bhokisi.
Post nguva: Nov-16-2020
Adress: Kwete. 14, Longcheng Mid-mugwagwa, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China
Iyo yekuvandudza nhoroondo uye zvakanakira ...
Nzira yekuderedza kutadza kwesimbi t ...
Iron bhokisi kurongedza ndiwe chete unogona '...
Maitiro ekuchenesa nekuchengetedza iyo tii gaba bhokisi ...
Basa rekutakura kwesimbi
Hot Zvigadzirwa / Sitemap
Mhete Inodhonza Inogona Kuvhura Claw, Cd Kuchengetera Kesi, Yakasarudzika Tin Bhokisi, Bhokisi ReTini, Tin Bhokisi Rekutakura, Simbi Yekuchengetedza Basket Iine Lid,